बोरिस Izaguirre पुस्तकहरु, एक राम्रो-चन्नेल शानदार युवा | वर्तमान साहित्य
बोरिस Izaguirre पुस्तकहरु
जुआन अर्टिज | | जीवनी, लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
"बोरिस इजागुइरे पुस्तकहरू" मा वेब खोजी गर्ने क्रममा मुख्य सन्दर्भहरू उपन्यासमा निर्देशित हुन्छन् हीरा भिल्ला (२००)) यस पुस्तकको साथ, बहिर्गमन भेनेजुएलाका लेखक त्यो वर्षको ग्रह पुरस्कारको लागि फाइनलिस्ट थिए। एक लेखकको रूपमा आफ्नो क्यारियरको अवधिभर, इजागुइरेले बाह्र साहित्यिक शीर्षकहरू सिर्जना गरेका छन् जस मध्ये बाहिर देखिन्छ उत्तरमा बगैंचा, २०१ in मा सबै भन्दा राम्रो विक्रेताको एक हुन।
कठिन बाल्यावस्थाको बावजुद बोरिस एक चतुर र उत्कृष्ट युवा थिए उसको डिस्लेक्सिया द्वारा चिह्नित र लगातार दुर्व्यवहार जसमा उनी अधीनमा राखिएको थियो। उनका आमा बुबा उनका जीवनमा ठूलो सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी उनकी आमा, जसले सँधै उसलाई जोगाउँथे। यो र बोरिस इजागुइरेका अन्य अनुभवहरू २०१ 2018 मा प्रकाशित उनकी आत्मकथामा प्रतिबिम्बित हुन्छन् र हकदार छन् आँधीबेहरीको समय।
1 बोरिस Izaguirre को जीवनी
2 व्यावसायिक सफलताहरु
3 बोरिस Izaguirre द्वारा चित्रित पुस्तकहरु
3.1 हीरा गाउँ (२००))
3.2 र अचानक यो हिजो थियो (२००))
3.3 उत्तरमा बगैंचा (२०१ 2014)
3.4 आँधीबेहरी (२०१ 2018) को समय
बोरिस Izaguirre को जीवनी
सेप्टेम्बर २,, १ 29 .1965, प्रख्यात निबन्धकार र फिल्म आलोचक रोडल्फो इजागुइरे र पेशेवर नर्तक बेलन लोबोको छोरा बोरिस रोडोल्फो भेनेजुएलाको राजधानी काराकस सहरमा जन्मेका थिए। आफ्नो आमाबाट प्रोत्साहित, धेरै युवा उमेर देखि उनले लेखन को लागी आफूलाई समर्पित। १ 16 बर्षमा ऊ पहिलो पटक अखबारमा प्रकाशित हुने मौका पायो El Nacional — देशको सब भन्दा महत्वपूर्ण अखबार मध्ये एक—, र सामाजिक ईतिहासबाट शुरू भयो: व्यर्थ पशु.
त्यो क्षण देखि, आफ्नो व्यावसायिक जीवन वृद्धि मा थियो, पहिले आफ्नो मूल देश मा र पछि आफ्नो दोस्रो घर मा: स्पेन। भेनेजुएलामा उनी टेलेनोभलासका लिपिको विकासमा आफ्नो सहभागिताको पक्षमा उभिए विद्रोही रूबी y गुलाबी महिला नाटककार जोसे इग्नासियो क्याब्रुजका साथ.
यी दुई नाटकीय मा प्राप्त सफलता को लागी धन्यवाद TVE, इजागुइरेले १ 1992 XNUMX २ मा युरोपियन महादेशमा विशेष गरी स्यान्टियागो डे कम्पोस्टिलामा सर्ने निर्णय गरे।
अनुभवको आधारमा, बोरिस इजागुइरेले करियर बनाएका छन् जसमा उनी टेलिभिजनलाई आफ्नो मुख्य स्थानको रूपमा लिन्छन्। एक पटक स्पेनमा बस्थे, सन् १ 1999 XNUMX। मा यस कार्यक्रममा सामेल भए पछि स्टारडममा उगियो मंगलवार इतिहास, जहाँ उसले लगातार years बर्षसम्म काम गर्यो। उनी महत्वपूर्ण स्पेनिश टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रस्तुतकर्ता पनि रहेका छन् Telecinco y TVE, र अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै Telemundo y भेनेभिजन.
२ 26 बर्षको उमेरमा, उनले आफ्नो पहिलो पुस्तक लेखे: शुतुरमुर्गको उडान (1991)। अन्तराल पछि उनले आफ्नो उपन्यास प्रकाशित गरेर लेखकको रूपमा काम सुरु गरे पेट्रोल निलो 1998 मा. त्यसबेलादेखि बोरिसले अरु १० शीर्षक लेखेका छन् जस मध्ये मध्य: हीरा गाउँ, दुई राक्षस एकसाथ y आँधीको समय - यो हालसालैको आत्मकथा पुस्तक हो। यो अन्तिम काम २०१ 2018 मा प्लानेटिing्ग पब्लिशिंग हाउसले प्रस्तुत गरेको थियो।
बोरिस Izaguirre द्वारा चित्रित पुस्तकहरु
हीरा भिल्ला (2007)
इजागुइरेले लेखेको यो आठौं पुस्तक हो, जसले उनलाई पुरस्कार प्राप्त गर्न धेरै नजिक ल्यायो २०० in मा ग्रह. यो १ 40 s० को दशकमा काराकसमा सेट गरिएको उपन्यास हो, विगतका तानाशाहको विनाशका कारण सीमितताको समय, तर पनी अझै बोनन्जासँग तेलको शोषणको परिणाम स्वरूप। यस कथानकले कराकस उच्च समाजको परिवारलाई प्रस्तुत गर्दछ, जो दुख्ख क्षणहरू पार गर्दैछन्।
सुरुमा, कथा दुई बहिनीहरूको जीवन संग सम्बन्धित छ: आइरिन र अना एलिसा, जो आफ्नो बुबाको मृत्यु पछि - आफ्नो छिमेकीहरूले सिकाए, Uzcátegui परिवार। यस महत्वपूर्ण परिवर्तनले यसको साथमा घृणा, पीडा र कष्टले भरिएको असंख्य परिस्थितिहरू ल्याउँदछ जसले अन्ततः बहिनीहरूलाई अलग गर्दछ।
आना एलिसाको स्वतन्त्रता र उनलाई अमर बनाउने केहि गर्न दृढ संकल्पको साथ कथा जारी छ, र यसको लागि ऊ घरको निर्माणमा आफ्नो उर्जा केन्द्रित गर्दछ। धेरै नाटकहरू र पात्रहरू हुनेछन् जुन यो प्लटमा भेला Diamante ऐतिहासिक स्मारक वरिपरिको रहस्यहरूले भरिन्छ।
Villa Diamante (लेखक ...
र अचानक यो हिजो थियो (2009)
Izaguirre प्रस्तुत गर्दछ क्युवामा १ 50 s० को अन्त्यमा सेट भएको उपन्यास, जुन अझै पनि फल्जेनसियो बटिस्टा द्वारा संचालित छ.
कथाले दुई युवा पुरुषहरूलाई मुख्य पात्रहरूको रूपमा देखाउँदछ भभालो र एफ्राने, जो अस्पतालमा छन् पछाडि टापुभरि आँधीबेहरीको निर्मम मार्ग। जब तिनीहरू निको हुन्छन्, तिनीहरू भेट्छन् र भविष्यका आकांक्षाहरू छलफल गर्छन्। तिनीहरूका परिवारले दावी नगरेको कारण, तिनीहरू आश्रयमा सारिन्छन्। उही ठाउँमा उनीहरू अरोरालाई भेट्छन्, एक युवती जो उनीहरूको जीवनमा ईन्ग्मा बन्नेछ।
उनीहरू बसेको शरणस्थानमा भएको घटना पछि, जवान मानिसहरू अलग हुन्छन् र तिनीहरूले अरोराबाट लामो समयसम्म फेरि सुनेन। यो त्यहाँ छ जहाँ दुई नायकको जीवनमा यात्रा सुरु हुन्छ। एकातिर: एफ्राउन रेडियोमा उद्यम, क्युबामा पहिलो रेडियो सोप ओपेरा सिर्जना गर्न आएको ठाउँमा; र अर्कोमा: ओवलले आफ्नो जीवनलाई राजनीतिको मार्गबाट ​​निर्देशित गरे।
धेरै घटनाहरू हुन् जुन पात्रहरू रिलि C क्युबामा बस्छन्, एउटा डरलाग्दो संक्रमणको भूमि हो। दृश्य एकदम सरल छैन: क्यास्ट्रोइस्ट "क्रान्ति" सबै चीजको साथ शक्ति लिन आउँदछ फुल्जेनसियो बटिस्टाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले, जसले अमेरिकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्छ।
दुईवटा धेरै भिन्न मार्गहरू यस मनमुटाउने हवानामा मिल्दछन्, कसरी प्रत्येक पृष्ठमा खुलासा गर्दै रोमान्स, प्रेम र मित्रता एक आँधीबेहरी राजनीतिक र सामाजिक वातावरण मा दृढ रहन खोज्छ।
र अचानक यो हिजो थियो ...
उत्तरमा बगैंचा (2014)
यो उपन्यास लेखकले प्रस्तुत गरेको उपद्व्याप हो, यो प्रसिद्ध ब्रिटिश जासूस रोजालिंडा फक्सको जीवनमा आधारित कथा हो। पहिलो उदाहरण मा, प्लट २० औं शताब्दीमा केन्ट (इ England्ल्यान्ड) काउन्टीमा सेट गरिएको छ। पछि उनी धेरै युरोपियन र एसियाली देशहरू हुँदै जान्छन् जहाँ नायकले उनको मुख्य कारनामहरू जनाउनेछन्।
यो सबै कुरा रोसालिन्डाका आमाबुबाले सम्बन्धविच्छेद गरेर सेन्ट मेरी गुलाब बोर्डि school्ग स्कूलमा लैजाँदा सुरू हुन्छ, जहाँ उनले आफ्नो बाल्यकाल बिताउँछन्। एक पटक किशोरावस्थामा तिनी फेरि आफ्नो बुबालाई भेट्न आउँछिन् जसले जासूसको रूपमा काम गर्थिन्। यो पेशाले चकित भएकी युवती आफ्नो बुबासँग भारत बसाई।
पहिले नै एशियाई देश मा रहेको, रोजालिंडा जासूसी को दुनिया मा काम गर्न थाल्छ। केहि समय पछि, नायक एक बुढो मानिस —Mr को प्रेममा पर्छ। Reginald Fox— र उसलाई विवाह। चाँडै पछि, उनले केही स्वास्थ्य समस्याहरू प्रस्तुत गर्छिन्, जसको लागि उनी ठीक नभए सम्म अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्दछ। यस्तो अवस्थाको परिणाम स्वरूप उनी आफ्नो पतिबाट अलग हुन्छिन।
निको भएपछि उहाँलाई नाजी जर्मनीमा गोप्य एजेन्टको रूपमा पठाइयो र आफैले हिटलरको चाल पत्ता लगायो। पूर्ण जासुसी काममा उनले जुआन लुइस बिगबेडर (एक पूर्व फ्रान्कोइस्ट मिलिटरी) लाई भेटे, जससँग उनी प्रेममा पागल भए, यस्तो परिस्थिति जसले उसले तयार पारेको सबै कुरालाई जटिल बनायो। यो साहसिक कार्यहरूले भरिएको एक अविश्वसनीय कहानी हो जसमा रोजालिंडा आफ्नो कर्तव्य र प्रेमको बिरूद्ध छिर्कीएको छ.
उत्तरमा बगैचा ...
आँधीको समय (2018)
२०१ 2018 मा, बोरिस इजागुइरेले आफ्नो कथा बताउन यो काम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे। कथा भेनेजुएला र स्पेनको बीचमा हुन्छ। लेखकले उनको बाल्यकाल कस्तो थियो विस्तारपूर्वक बताउँछ, कसरी एक बच्चाको रूपमा उहाँ धेरै समस्याहरू पार गर्नुभयो आफ्नो डिसलेक्सिया र उसको स्वभावको कारण।
Izaguirre युवा उनको स्कूल मा र यो बाहिर दुबै बदमाश भोग्नुपर्‍यो। यो दुर्व्यवहार ज्यादातर वयस्कहरूबाट आएको हो जसले आफ्नो आमाबाबुको नराम्रो प्रभावका कारण ऊ यति शोभायमान भएको कारणलाई औंल्यायो। उनको आमाले ती आरोपहरू अस्वीकार गरे जसले उनको बचाव गरे र उनको आफ्नै घरमा सुरक्षित राख्ने प्रयास गरे जुन बोरिसको शरणस्थान बन्यो।
लेखकले गेराार्डो नामका व्यक्तिले व्यक्त गरेको प्रेमको पनि चर्चा गरे जुन देशका एक प्रसिद्ध पत्रकारको छोरो हो। आत्मकथाले उनको जीवनको पहिलो years० बर्ष वर्णन गर्दछ, जो आँधीबेहरी, जोशिलो, ग्लैमरस र ठूलो विकासको थियो।
Izaguirre आफूलाई जस्तो देखिन्छ; यसले उनको स्कूलको जीवन, उनको पहिलो प्रेम, र बलात्कार जत्तिकै गाह्रो घटनाको विवरण दिन्छ। लेखकको रूपमा उनले आफ्नो पहिलो चरणहरू पनि वर्णन गरे जबसम्म उनले उनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो अवसरहरू प्रदान गरेको देशमा बसाइँ सरेन।
आँधीबेहरी मौसम ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » बोरिस Izaguirre पुस्तकहरु
कार्मेन मोला: उनको त्रयी
मिशेल Houellebecq एक जन्मदिन छ।5उनको काम को कविता